Wondershare MobileTrans User Guide - WinPhone ka iOS
MobileTrans Guide: WinPhone ka iOS
Nzọụkwụ 3. Jikọọ ma gị iPhone na Windows ekwentị gị na kọmputa na iji USB cables. Mgbe ị jikọọ ma ngwaọrụ, ị nwere ike ịgbanwee na isi iyi na ebe ekwentị mkpanaaka na site na ịpị "tụgharịa" bọtịnụ na usoro.
Nzọụkwụ 4. Họrọ faịlụ ị ga-achọ nyefee site n'inyocha n'igbe faịlụ ụdị.
PS. Iji nyefee si Windows ekwentị iPhone ozugbo, usoro ihe omume pụrụ ịkwado Photos, Videos, na Music faịlụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee Ndi ana-akpo si Windows ekwentị iPhone, biko ndabere kọntaktị ruo OneDrive mbụ. Mgbe na-eji Mobiletrans iji weghachi kwadoo kọntaktị na iPhone.
Ọzọ: Android ka Android